Dlive အကြောင်း အနည်းငယ် — Steemkr
Dlive အကြောင်း အနည်းငယ်
This is my translation on @dlive 's post to Myanmar Language .I hope that may beachance for Myanmar language user who want to use the tag #dlive .
MSC မိသားစု ဝင်များ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ
ယခု post မှာ @dlive ၏ post ကို ဘာသာပြန်ထား ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ယခု post သည် dlive platform တွင် လျှောက်လှမ်းလိုသည့် မြန်မာစာ အသုံးပြုသူများ အတွက် information ရရှိစေရန် အဖြစ်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။မည်သို့ လျှောက်လှမ်းရမည်ကို လမ်းညွှန်ထား သည့် user guide တစ်ခု မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ MSC ၏Leader ဖြစ်သော အစ်ကို @kachinhenry နှင့် MSC ၏ Admin Team မှ စီစဉ်ပေးသည့် တစ်လချင်းစီ၏ အကောင်းဆုံး ဆုရှင် ပြိုင်ပွဲတွင် #myanmar tag အတွင်းမှ ယှဉ်ပြိုင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့အတူ #Dlive tag ကို အသုံးပြု၍ stream လုပ်ဆောင်နေသူများ( Dlive channel မှ live လွှင့်ခြင်း) အနေဖြင့် #dlivestar tag အတွင်းမှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် နိုင်ပါသည်။Gamer များအနေဖြင့်လည်း မိမိဆော့ ကစားသည့် game များကို live လွှင့်၍ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။
Dlive မှာ အခြား အံ့သြပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ရက်သတ္တ ပတ် ကို စတင်နေပါပြီ။Dlive platform မှာ အပတ်စဉ်တိုင်း 15 000 ထက်မကသော active user များ ပါဝင်လျက် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Dlive တွင် user များအတွက် အပတ်စဉ် ပြိုင်ပွဲများကို ကျင်းပပေးလျက် ရှိနေပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီ ပထမပတ် အတွက် ပြိုင်ပွဲများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အောက်ပါ Discord channel တွင်လည်း သွားရောက်၍ စနည်း နာနိုင်ပါသည်။
• 1 - Dlive Stars
ပြိုင်ပွဲ no 1 မှာ DLive Stars ဖြစ်ပါသည်။Tag အတွက် #dlivestar ကို အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပါ၏။၎င်း tag မှာ အပတ်စဉ် dlivestar များအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
post တင်ရမည် ကာလအပိုင်းအခြားမှာ 2/2/2018 မှ 2/9/2018 နေ့အထိ ဖြစ်ပါ၏။
• @dlive ထံမှ 50% vote [ ၎င်းသည် ဤpost (မူရင်း
post) ရေးသားနေချိန်တွင် 600 USD ခန့် တန်ကြေးရှိပါ၏။ဈေးကွက်ပေါ်မူတည်၍ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။]ေ
• DLiveStarBooster ၏ resteem လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း
• အပတ်စဉ် အရည်အသွေး အမြင့်ဆုံးသော post ရေးသားသူများကို စာရင်းထုတ်ပြန်ပေးခြင်း (တစ်ပတ်လျှင် အများဆုံး5ယောက်)
စသည်တို့ကို ခံစားခွင့် ရှိမည် ဖြစ်ပါ၏။
DLive Star’s များကို ရွေးချယ်သည့်နေရာတွင် ယခု ပြိုင်ပွဲ သီတင်းပတ် အတွင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသူများ၏ stream အရည်အသွေးအပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်သွားမည် ဖြစ်ပါ၏။၎င်း ရွေးချယ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူ များ၏ stream တစ်ခုချင်းစီအပေါ် Dlive အဖွဲ့ဝင် ဝန်ထမ်းများ၏ voting များလည်း ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါ၏။
( Stream ဆိုသည်မှာ Dlive channel ကို အသုံးပြု၍ live လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Dlive channel သို့ ဝင်ရောက်ရန်မှာ မိမိ၏ steemit username နှင့် pass ကိုအသုံးပြုရပါသည်။)
•2- Better DLive Survey
ပြိုင်ပွဲ no2မှာ Better Dlive Survey ဖြစ်ပါသည်။Tag အတွက် betterdlive ကို အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပါ၏။
D live platform ၏ အရည်အသွေးများ တိုးတက်ရန် အတွက် feedback များ လိုအပ်လျက်ရှိပြီး feedback လုပ်ဆောင်ပေးသော user များအတွက် ဆုကြေးများ ရှိစေမည့်အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းအတွက် မည်သည့် အရာများ လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်မည် နည်း ။အောက်ပါ မေးခွန်းများကို ဖြေဆို၍ steemit တွင် post တစ်ခု ရေးသားရမည် ဖြစ်ပါ သည်။
stream တစ်ခုသည် ကောင်း၏ မကောင်း၏ ကို သင်
DLive နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ ထင်မြင်ချက်သည် ဘာပါလဲ။
DLive သည် မည်သို့ တိုးတက်လာနိုင်ပါသနည်း။
ထို့ပြင် အောက်ပါ မေးခွန်းများကို အနည်းငယ် ရှင်းလင်း ဖြေဆိုရန် လိုအပ်ပါသည်။
DLive တွင် steaming လုပ်ဆောင်ခြင်းကို အဘယ့်ကြောင့် စတင်ခဲ့ပါသနည်း။
သင်၏ streaming သည် ဘာပါလဲ။
အနာဂါတ် တွင် သင်၏ stream ကို တိုးတက်လာစေရန် မည်သို့ အစီအစဉ် ရှိပါသနည်း။
၎င်း no2ပြိုင်ပွဲစဉ်အတွက် အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားမှာ 2/2/2018 မှ 2/9/2018 ထိ ဖြစ်ပါသည်။
@dlive ၏ 15-30% vote (post ၏ အရည်အသွေး ပေါ် မူတည်၍)
post များ အားလုံးကို ကြည့်ရှု၍ အရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ကာ Admins များ၏ ရွေးချယ်မှုရရှိသော သူများကို voting ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ဤပြိုင်ပွဲအ တွက် DLive user တစ်ဦးချင်းစီသည် တစ်ကြိမ်သာ ဆုကြေးရရှိမည် ဖြစ်ပါ၏။ယခုပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ခြင်း မပြုခင် အချိန်တွင် Dlive တွင် stream လုပ်ဆောင်ဖူးသူ ဖြစ်ရပါမည်။ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူများသည် steemit တွင် အနည်းဆုံး reputation 35 ရှိရပါမည်။
SOURCE >> https://steemit.com/dlive/@dlive/new-campaign-announcement
(မူရင်း post ကို အထက်ပါ link တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်)
ဘာသာပြန်သူ >> @shweyaungmyanmar (MSC -049)
myanmar steemit dlive betterdlive translation
ပညာ မဟုတ်ပါဘူး bro
အချက်အလက် တွေ မျှဝေတာပါ
လေ့လကြည့်အုံးမယ် Thz Bro
အဲဒီမှာ အရင် ဖတ်ကြည့်ပါ bro
window 7+ မရှိသေးတာရယ်
game တွေလွှင့်ဖို့ မဆော့တတ်တာရယ်
ကျေးဇူပါbro မျှဝေပေးတာအရမ်းဘဲ ကောင်းပါတယ်
ဟုတ် ဖတ်ရှုတာ ကျေးဇူးပါဗျ
အခုလို post တွေကို ဘာသာပြန်ပေးတာအလွန်ပဲ အကျိုးရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။ အမှန်တော့ Steemit မယ် မြန်မာတွေအတွက် မျှ ဝေစရာ အများကြီး ကျန်နေပါသေးတယ်။
ကျေးဇူးပါ အခုမှ သိတာ
သိပ်တော့နားမလည်ဘူး လေ့လာဦးမှပဲ Post ကလည်း Save မရတာ ခက်တယ်
try ကြည့်ပါဦး အာကာ
Thanks par bro.
ဆရာတို့ မှာ Newbirs များနှင့် အချိန်ပေးနေရချိန်တွင်ယခုလိုရှာဖွေ တင်ပြပေးခြင်းကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားရေ၊ ကျန် ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူများကိုလည်း ရှာဖေဖတ်ရှု့ကာ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ရန် တိုက်တွန်းလျှက်ရှိပါတယ်ဗျာ...